တရှာလုံးနီးပါး အောကျလမျးပညာသညျတှေ ဖွဈနကွေတဲ့ မွနျမာပွညျ အထကျပိုငျးက လမိုငျးရှာ (ဖွဈရပျမှနျ) – Sport Gaber
အဲ့လိုမျိုးဆန်းကျယ်တဲ့အဖြစ်အပျက် ၊ နှောင်းလူတွေ.. ကလေးငယ်တွေအထိ လက်ဆင့်ကမ်းပြီး အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်ဆန်ဆန်ကျောရိုးယူပြီးပြောစမှတ်တွင်လောက်တဲ့ ချောက်ချောက်ချားချား ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးတွေဆိုတာလည်း မနည်းမနောပါပဲ၊
ဒီလိုဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုဖြစ်ခဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးကြတဲ့ သူတွေဆိုတာလည်း တစ်ချို့က ကွယ်လွန်သွားကြသလို ၊ ဟိုးရှေးလူတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ၊ တစ်ချို့က အခုထိ သက်ရှိထင်ရှားရှိပြီး
လက်ဆုပ်လက်ကိုင်သက်သေနဲ့တကွ တိတိကျကျပြောပြနိုင်တဲ့အထိ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ၊ နေရာတွေလည်း ရှိနေတုန်းပါပဲ ၊ အဲ့ဒီလို ပြောပြနိုင်ဆဲဖြစ်တဲ့ ရွာလေးတွေထဲမှာ ရွာလေးတစ်ရွာကလည်း အပါအဝင်ပေါ့…၊
ရွာကလေးရဲ့နာမည်ကိုက ဆန်းနေတာ လမိုင်းရွာ တဲ့ ။
လမိုင်းဆိုတဲ့ ရွာကလေးက ဒေသအခြေအနေအရ တောဆန်ပြီးတော့ လုံးဝနီးပါး မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ ရွာကလေးတစ်ရွာပါပဲ ၊
လမိုင်းရွာဆိုတာလည်း ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲမှာ တည်ထားတဲ့ ရွာသေးသေးလေးတစ်ခုပေါ့ ၊
ရွာနာမည်ကလည်း ရွာစတည်ကတည်းကပေးထားတဲ့နာမည်လေးပါ ၊ ရွာကလေးရဲ့ထူးခြားချက်တွေထဲက တစ်ခုက လမိုင်းရွာတစ်ရွာလုံးက လောင်းကစားကို ခုံမင်ကြတာပါပဲ ၊
တစ်ရွာလုံးက လောင်းကစားနဲ့ပတ်သတ်ရင်လူညီပြီးသား ၊ လောင်းကစားထဲမှာမှ ဖဲရိုက်တဲ့ဘက်မှာ ပိုအားသန်ကြတဲ့သူတွေ ၊ အလှူမင်္ဂလာဆောင် ၊ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ် ၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကလေး ကင်ပွန်းတပ်ပါ မကျန် ဖဲဝိုင်းအမြဲရှိတယ် ၊
ဒါပေမယ့် နယ်မြေ ဖွံ့ဖြိုးလာလို့ထင်တယ် ဟိုးအရင်ကလောက်တော့ မရဲကြတော့ဘူး ၊
သူတို့ရွာမှာ လူတစ်ယောက် သေပြီဆို သိပ်ပျော်ကြတာ ၊ ဘေးနားကရွာတွေကဆိုရင် တစ်ခုခုအချင်းချင်း စနောက်ကြတဲ့အခါ တွင်တွင်ပြောလေ့ရှိတာတစ်ခုရှိသေးတယ်
ဘာတဲ့ “မင်းသေရင် လမိုင်းသွားပို့မယ် အနည်းဆုံးတော့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလောက်တော့ စီးလို့ရမှာသေချာတယ် ” လို့ ပြောလေ့ရှိကြတယ် ၊
ဆိုလိုတာက ဒီမသာ (အသုဘ)ကို အမှီပြုပြီး ဖဲရိုက်ရင်းက ငွေတွေနိုင်ပြီး ဆိုင်ကယ်တောင်စီးနိုင်တဲ့အထိလို့ပြောချင်တာ ၊
ဟုတ်လည်းဟုတ်တာပဲလေ လမိုင်းရွာက ရွာသာငယ်တာ သူတို့ရွာမှာ ဖဲဝိုင်းဆိုတာ ပြတ်တယ်လို့ကိုမရှိတော့ အနီးအနားပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ ရွာတွေဆီက ဖဲ ၊လောင်းကစား ဝါးသနာအိုးတွေနဲ့ လမိုင်းရွာက စည်ကားနေဆဲပဲ ၊
အသုဘဆိုရင် အလောင်းကို အရိုးကျတဲ့အထိထားပြီး ဖဲရိုက်ကြတဲ့ရွာ အဲ့လောက်အထိခုံမင်ကြတာ ၊ နောက်ပြီးအဲ့ဒီရွာက ရွာခံတွေက စရိုက်နည်းနည်းကြမ်းကြသေးတယ် ၊ ရွာမှာ ပညာသည်တွေလည်း အရမ်းပေါများကြတယ် ၊
လမိုင်းရွာသူလေးတွေဆိုတာလည်း မြို့ကမင်းသမီးရှုံ့လောက်တဲ့အထိ ချောလှကြတဲ့သူတွေ ၊ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ ရွာသူလေးတွေကို တစ်ခြားရွာက ကာလသားတွေ ပိုးပန်းဖို့ နေနေသာသာ မျက်လုံးနဲ့တောင် စိုက်မကြည့်ရဲ့ကြဘူး ၊
ပညာသည်ပေါများတဲ့ရွာမို့လို့ ကြောက်ကြတယ် ၊
တစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာအသွားအလာလုပ်ရင်လည်း အခုခေတ်ဆို ဆိုင်ကယ်တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာပြီဆိုပေမယ့် အရင်ဆို ထုံးစံအတိုင်း လှည်းကိုပဲ အဓိကထား သုံးကြရတာလေ ။
တစ်နေ့ လမိုင်းရွာမှာ အသုဘ ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသံကိုကြားလို့ လမိုင်းရွာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ ကျွဲတွင်း ရွာက ဖဲဝါသနာအိုး သုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်း တို့တွေက လမိုင်းရွာကို ချီတတ်လာဖို့ ပြင်နေကြပြီ ၊
ကျွဲတွင်းရွာဆိုတာ လမိုင်းရွာနဲ့ ကပ်လျက်ဆိုပေမယ့် တစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာကြားမှာ မျက်စိတစ်ဆုံး ကြည့်မကုန်နိုင်တဲ့ လယ်ကွင်းကျယ်ကြီးတွေက ခြားထားသေးတယ် ၊
အနည်းဆုံး တစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာအကွာအဝေး နှစ်မိုင်ကျော်ကျော်လောက်တော့ ရှိလိမ့်မယ် ၊ ဒီလိုနဲ့ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်း တို့ သုံးယောက်သား နွားလှည်းလေးနဲ့ လမိုင်းရွာဆီကို လှမ်းလာခဲ့ကြတယ် ၊
ဖဲကစားချင်ဇောနဲ့မို့ စိတ်တွေလည်းလောနေကြတယ် ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်း ဘယ်လိုကစားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ ၊ အရင်တုန်းက ဘယ်လောက်ထိနိုင်ခဲ့ဖူးတယ် ၊
ဘယ်လိုမျိုးပွဲတွေမှာ ဆန်းဆန်းပြားပြားဖြစ်တာကြုံဖူးတယ်ဆိုတာတွေကို အချင်းချင်း ရေပတ်မလည်အောင် လမ်းတစ်လျှောက်မှာပြောလာရင်းကနေ လမိုင်းရွာကို ရောက်လာခဲ့ကြတယ် ၊
ရွာအဝင်မှာသူတို့ကို ကြိုဆိုနေတဲ့ ရွာအဝင်လမ်းဘေးနားက ထန်းပင်ရှည်ကြီးတွေနဲ့ တဲအိမ်ပုပုလေးတွေကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်း ညိုစိုး က “ ဟေ့ယောင်တွေ မင်းတို့အသိဆိုတဲ့အိမ်က ရွာဘယ်နေရာနားလောက်မှာလဲ ” လို့ မေးလိုက်တယ် ၊
ညိုစိုးအမေးကို ချက်ချင်းဆိုသလို မြင့်သိန်း က ထဖြေလိုက်တယ် “ဒီလမ်းအတိုင်းရှေ့နည်းနည်းဆက်သွား ဟေ့ာဟိုမှာတွေလား အေး.. အဲ့ဒီအိမ်ဘေးနားက လမ်းအတိုင်းဆက်ဝင်လိုက် တစ်အိမ် ၊ နှစ်အိမ် ၊ သုံးအိမ်မြောက် အိမ်ရှေ့မှာ ဒန်းပင်လေးစိုက်ထားတဲ့အိမ်ပဲကွ
အေး.. အဲ့ဒီအိမ်ရှေ့မှာရပ်လိုက်တော့ ” မြင့်သန်းက ညိုစိုးအမေးကိုဖြေလိုက်ရင်း နွားလှည်းမောင်းနေတဲ့ ဖိုးတေ ကိုလည်း လမ်းသေချာညွှန်ပြလိုက်သေးတယ်။
မြင့်သန်းပြောတဲ့အိမ်ရောက်တော့ သူတို့တွေ လှဲပေါ်ကဆင်းလိုက်ကြပြီးအိမ်ထဲကို ဝင်သွားလိုက်ကြတယ် ၊
အိမ်ရှင်တွေက ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်း တို့ကို မြင်တော့ အားရဝမ်းသာကြိုဆို နှုတ်ခွန်းဆက်သသေးတယ် ၊ အဲ့ဒီ့အခါမှ မြင့်သန်းက အိမ်ရှင်တွေထဲက သူ့အသိဆိုတဲ့ အရီးလေးတစ်ယောက်ကိုစကားလှမ်းပြောလိုက်တယ်
“အရီးလေးကြိုင် ကျုပ်တို့ ဒီရွာမှာ နာရေးတစ်ခုရှိတယ်ကြားထားလို့ အပျင်းပြေ ဖဲလာကစားတာပါ အရီးလေး ” အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရော တစ်ဖက်က အရီးလေးက
“ အေးကွယ် ရွာအနောက်ဘက်နားကအိမ်မှာရှိတာလေ၊ စည်တာမှပြောမနေနဲ့ ငါတို့ရွာအကြောင်းလည်းနင်သိသားပဲ ကဲကိုယ်တော်တွေ သွားမယ်ဆိုလည်း မြန်မြန်သွားပြီးမြန်မြန်ပြန်လာကြ ၊
ငါ့တူတွေ နောက်ကျနေရင် မှောင်ပြီးတော့ ရွာအပြန်ခတ်နေမယ်ကွယ်”
အရီးလေးကြိုင် စကားကြောင့် ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်း တို့သုံးယောက်သား ငွေစက္ကူအပြည့် ထည့်လာတဲ့ ဘေးသိုင်းလွယ်အိတ်တွေကို သိုင်းလွယ်လိုက်ရင်း သူတို့စီးလာတဲ့နွားတွေကို ကြိုးဖြည်ပေး ၊ ရေတိုက် ၊ အစာကျွေးလုပ်ရင်း အရီးလေးအိမ်မှာ ဒေါက်ထောက်ထားတဲ့ လှည်းကလေးကိုပါ ထားခဲ့လိုက်ပြီး ဖဲဝိုင်းဆီကို အရမ်း တက်ကြွနေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ အတူတူသွားဖို့ ပြင်နေကြတုန်း ၊ အိမ်ဝိုင်းထဲကို ဝင်လာတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံပါလေရော..
အဲ့ဒီ့လူကလည်း မြင့်သိန်းကိုမြင်တာနဲ့ ရင်းရင်းနီးနီးပုခုံးကိုဖက်ထားပြီး စကားတွေပြောရင်း ရွာထဲက တစ်နေရာဆီကို ဦးတည်ပြီးခေါ်သွားပါလေရော ၊ ဟိုနေရာရောက်တော့မှ ရွာထဲက အရက်ပုန်းဆိုင်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်..
ခေါ်လာတဲ့သူကလည်း မြင့်သိန်းနဲကရင်းနီးတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြန်တော့ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်း တို့တွေလည်း အားနာပါးနာနဲ့ လိုက်ပြီးအရက်သောက်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ် ၊
အရက်သောက်ပြီးတော့မှ ရွာထဲက အသုဘအိမ် ဖဲဝိုင်းဆီကို ဦးတည်ပြီးထွက်သွားဖြစ်ကြတယ် ။
နာရေးအိမ် ရောက်တော့ အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်မှ လူတွေ ပြည့်လျှံနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ် ၊ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်း တို့တွေလည်း ဖဲဝိုင်းတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီး
ဝိုင်းချောင်တဲ့ ဖဲဝိုင်းထဲမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ကြရင်း အိမ်ကနေ မရှိရှိ ရှိတာလေးတွေအကုန်သယ်လာတာလေးနဲ့ ဝင်ကစားဖြစ်ကြတယ် ၊
ကံကပဲဆိုးနေတာလားတော့မသိဘူး တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ် ဆက်တိုက်ကို သုံးယောက်လုံး ရှုံးနေကြရော ၊ အရက်ကလေးကလည်းအရှိန်တက်လာတော့ ရှုံးလေ ပိုပြီး ငွေထိုးလေနဲ့ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး
သုံးယောက်သား ပါသမျှအကုန်ကုန်သွားပါလေရော..၊ အလာတုန်းက လွယ်လာတဲ့ လွယ်အိတ် ဖောင်းဖောင်းလေးတွေကလည်း ပြားကပ်လို့ ၊ ထပ်ဆော့ချင်သေးပေမယ့် လောင်းစရာငွေကြေးတစ်ပြားတောင် မရှိတော့တာမို့ သုံးယောက်လုံးလက်လျော့ပြီး ထပြန်လာလိုက်ကြတယ် ။
ဒီ လမိုင်းရွာမှာက ဖဲဝိုင်းတွေ ၊လောင်းကစာဝိုင်းတွေ ဘယ်လောက်များများ ၊ ရန်ဖြစ်တာ ၊ ခိုးတာ ၊ ဝှက်တာ ၊ ကလိန်ကကျစ်ကျတာတွေ မရှိကြဘူး ၊
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရွာစည်းကမ်းကိုက လမိုင်းရွာမှာ ဘယ်သူမှ မခိုးရဘူး ၊ ကလိန်ကကျစ်မကျရဘူး ၊ တကယ်လို့လုပ်ချင်လည်းလုပ်ခွင့်ပေးထားတယ် သူတို့မသိအောင်လုပ်ပေါ့လေ… ၊
သိသွားရင်တော့ လုပ်တဲ့သူအတွက် မတွေးဝံ့စရာဘဲ ၊ အိမ်ကိုအသက်ပြန်ပါသွားမယ်မထင်လေနဲ့ ၊ တစ်ရွာလုံးနီးပါးက (စုန်း၊အောက်လမ်း)ပညာသည်တွေလေ ။
ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်း တို့သုံးယောက်သား လမိုင်းရွာကနေ ဖဲရှုံးပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ နွားလှည်းထားထားတဲ့အိမ်ကိုသွား နွားလှည်းလေးယူ ၊ အိမ်ရှင်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ကိုယ့်ရွာကိုယ်ပြန်ဖို့ပြင်လိုက်ကြတယ် ၊
အချိန်က ညတောင်ရောက်နေပြီ ၊ ဒီနေ့ညများဖဲနိုင်လိုက်ရင် ဒီရွာမှာပဲ တစ်ညလုံးမူးအောင်သောက်ပြီး မနက်မှ ပြန်မယ်စိတ်ကူးထားတာ အခုတော့ အရှုံးသမားတွေရဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းက တိတ်ဆိတ်လို့ ။
လရောင်က ညအမှောင်ကို တိုးမပေါက်သလို ဝါးတားတားလေးနဲ့..
လှည်းမောင်းသူကအလာတုန်းကလိုပဲ ဖိုးတေ ၊ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက် ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်း တို့က လှည်းအနောက်မှာ ပတ်လက်ကလေး မိုးကောင်းကင်မဲမဲကြီးကိုကြည့်ရင်း လိုက်ပါလာကြတယ် ၊
သူတို့သုံးယောက်သားလှည်းကလေး တအိအိနဲ့မောင်းလာလိုက်တာ လမိုင်းရွာထဲကတောင် ထွက်စပြုနေပြီ ၊
ရွာအထွက် လယ်ကွင်းအစပ်လေးအနားရောက်တော့ သူတို့လှည်းအနောက်က ထူးဆန်းတဲ့ အသံတစ်သံကို ကြားလိုက်ရတယ် ။
လူတွေက ညစ်နေကြတဲ့အထဲ လမိုင်းရွာက သူငယ်ချင်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့ မီးတောက်အရက်ပုလင်းနှလုံးကအစစ်ပါလာသေးတယ်လေ ၊
ရုတ်တရက် လှည်းအနောက်က အသံကြားရတော့ အံ့သြသွားပြီး သုံးယောက်သား လှည်းကိုခဏရပ်လိုက်ရင်း အသံကြားတဲ့နေရာကို လိုက်ရှာကြည့်နေမိတယ် ၊
အသံက သူတို့အနောက်ဘက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ လမိုင်းရွာအထွက်နားလေးမှာရှိတဲ့ ခြုံထဲကနေ ကြားနေရတဲ့အသံ ၊
ခြုံကလေးကလည်းလှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ်နဲ့ အားလုံး ခြုံနေရာကို သေချာ စိုက်ကြည့်နေမိတုန်း ခြုံထဲကနေ ဝုန်းဆို ဝက်ကလေးသေးသေးလေးတစ်ကောက် ခုန်ထွက်လာတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ၊
လရောင်မှိန်ပြပြဆိုပေမယ့် ဝက်ကလေးကိုတော့ သဲသဲကွဲကွဲမြင်နိုင်သေးတယ်လေ ။
ဝက်ကလေးမို့ သူတို့အာရုံတွေကို ပြန်လွှဲလိုက်ရင်း ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်းတို့လည်း လှည်းကိုဆက်မောင်းလိုက်ကြတော့ ဝက်ကလေးကတော့ အန္တရယ်ကိုမြင်ပုံမရဘူး.. တအိအိသွားနေတဲ့ သူတို့လှည်းလေးနောက်ကို ပြေးလိုက်လာပါလေရော ၊
ဝက်ကလေးဆိုပေမယ့် ဝက်ပေါက်တစ်ကောင်ပါ ၊ လူအရမ်းယှဉ်နေတယ် ၊ ဝက်ပေါက်လေးက အချိန်နှစ်ဆယ်လောက်တော့ထွက်မယ့်ပုံရှိတယ် ၊
ဘယ်သူဘယ်ဝါပိုင်တဲ့ ဝက်မှန်းလည်းသူတို့မသိဘူး ၊ လူအရမ်းယဉ်နေတာနဲ့ သူတို့တွေ ချော့ခေါ်သွားကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် ။
“ ဟေ့ယောင်တွေ ငါတို့ ဖဲလည်းရှုံးလာတဲ့အတူတူ ဒီရွာက ငါတို့နဲ့ထိုက်တန်တာ တစ်ခုခုတော့ ယူသွားသင့်တယ်လို့ ငါထင်တယ် ”
ညိုစိုးစကားထဲမှာ အဓိပ္ပာယ်တွေပါနေမှန်းသိလိုက်ကြတာမို့ ဖိုးတေ က ဝင်ထောက်လိုက်တယ်
“လူရိပ်လူကဲလည်းကြည့်ဦး ဒီရွာအကြောင်းမင်းပိုသိပါတယ် မြင့်သိန်း”
မြင့်သိန်းလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ လူရှင်းနေတာနဲ့ လူယဉ်နေတဲ့ ဝက်ပေါက်လေးကို ချော့မော့ပြီး လှည်းနောက်က ခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ် ၊
ဝက်ကလေးကို ပွေ့ချီပြီး လှည်းပေါ်တင်သယ်လာလိုက်တာ ဝက်ကလေးကလည်း ငြိမ်နေတာပဲ ။
ဒီဝက်ကလေးက အရင်ကလည်း လှည်းတွေဘာတွေလိုက်စီးဖူးတဲ့ပုံမျိုးပဲ ၊ သခင်နဲ့လည်းရင်းရင်းနီးနီးနေတဲ့ပုံပေါ်တယ် ၊ တွေ့တဲ့လူနောက်ကို လိုက်ရဲတယ်ဆိုတော့ လူမွေးထားတာတော့ သေချာနေပြီ ၊
ဒါပေမယ့် ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်း တို့သုံးယောက်လည်း ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမိမနေတော့ဘူး.. သူတို့ရွာအရောက် လှည်းကိုမောင်းလာခဲ့လိုက်ကြတယ် ၊
ရွာအနားကိုပြန်ရောက်တော့ သုံးယောက်သား ညတွင်းချင်းပဲ ရွာအစပ်နားက အိမ်မှာ ကိုင်စရာတွေတောင်းပြီး ဝက်ကလေးကို (ဖော် ၊ သတ်) ကိုင်ကြတော့တာပဲ ၊ ကိုင်လို့လဲပြီးရော အသားတွေကို သူတို့စီးလာတဲ့ လှည်းပေါ်မှာ ဖက်ခင်းတင်ပြီး ရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ် ၊
သူတို့ ဝက်ကိုင်ထားတဲ့ ဓါးတွေ ၊ ရေနွေးတည်ဖို့ ဒယ်တွေ ၊ ပုဆိန်တွေကို ငှားပေးတဲ့ ရွာအစပ်နားက အိမ်အတွက်လည်း ဟင်းစားပေးခဲ့ကြသေးတယ် ၊
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့အိမ်က တစ်အိမ်လုံး ဝက်သားရှောင်ထားတဲ့ကရင်စပ်တဲ့အိမ်မို့ မယူကြဘူး သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုပဲ သေချာ ပြောင်အောင် ပြန်ဆေးပေးခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့တယ် ။
ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်း တို့တွေလည်း သူတို့ ဝက်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သေချာ ပြန်ဆေးကြောပြီးပေးခဲ့လိုက်ကြတယ် ။
ညက ၂ချက်တီးလောက်ပဲရှိသေးတယ်.. ဝက်ကလည်း အချိန်နှစ်ဆယ်လောက်ထွက်တဲ့ဝက်ဆိုတော့ မကုန်တာနဲ့ မိသားစု ဆွေမျိုးနီးစပ်အိမ်တွေကို လိုက်ဝေပေးလိုက်ကြတယ်.. ၊
ဒီလိုနဲ့ ညတစ်ညက ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ.. ။
နံနင်ခင်းတစ်ခုကို မသာယာစေအောင်ပြုလိုက်သူက လမိုင်းရွာက ရွာသူ မသန်းအေး ၊ အသက်ငါးဆယ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ မသန်းအေးတစ်ယောက် သူမွေးထားတဲ့ ဝက်ကလေးပျောက်လို့ တစ်ရွာလုံးကို ပတ်သောင်းကျန်းပြီး လိုက်ရှာနေလိုက်တာ ဒေါင်းတောက်နေတာပဲ ။
“ အမလေး.. ကျုပ်သမီးလေး ကိုယ်ကျိုးနည်းပြီထင်ပါရဲ့ ၊ ဝက်ကလေးတွေပေါက်လာကတည်းက သူတစ်ကောင်ပဲအသက်ရှင်တာနဲ့ သားသမီးမရှိတဲ့ကျုပ်မှာလေ.. ဒီဝက်ကလေးကို ကလေးတစ်ယောက်လို ကျုပ်နို့တိုက်ပြီး မွေးလာတာပါတော် ၊
ခါတိုင်းဆို သမီးလေး အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်လာနေကျပါ မနေ့က တစ်နေကုန်ပျောက်နေတာ ဒီမနက်အထိပြန်မလာဘူး.. သေချာနေပါပြီ ကျုပ်သမီးလေးတစ်ခုခုဖြစ်ပြီထင်တယ် အဟီး.. ”
တဖြည်းဖြည်း တစ်ရွာလုံးလည်းအနှံ့မေးပြီးရော.. သူ့ဝက်ကလေးရွာထဲမှာ မရှိတော့တာသေချာပြီဆိုတာသိလိုက်တဲ့အတွက် မသန်းအေး ဒေါသပိုထွက်သွားမိတယ် ။
မသန်းအေး ဆိုတာ ရွာထဲမှာ ဆယ်နှစ်ကြိုးလို့တောင် အများက သတ်မှတ်ထားကြတဲ့သူတစ်ယောက် မသန်းအေး နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အရာမှန်သမျှ တစ်ရွာလုံးကရှောင်ကြတယ် ၊ ကြောက်ကြတယ် ၊
အခု တစ်ရွာသားတွေက မသန်းအေးရဲ့ ဝက်ကလေးကို ခိုးသွားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပြီ ၊ လမိုင်းရွာတစ်ရွာလုံးကလည်း ဒီတစ်ခါ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲဆိုပြီး မသန်းအေး ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မယ်ဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေမိကြတယ် ။
ရက်ပိုင်းလောက်တော့ မသန်းအေး ဘာမှလှုပ်ရှားတာမတွေကရဘူး..ပတ်ဝန်းကျင်ကပြန်သိထားကြတာတော့ မသန်းအေး က စိတ်နာဒေါသကြီးလွန်းလို့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရင် ခံရတဲ့သူ သိပ်မခံရမှာစိုးလို့ဆိုပြီး သူကဆရာကိုပင့်ထားတယ်လို့ပြောကြတယ် ။
ဒီသတင်းတွေကလည်း အမှန်ပါပဲ ရက်ပိုင်းလောက်အကြာမှာ မသန်းအေးရဲ့ ဆရာဆိုတဲ့သူ မသန်းအေးဆီကို ရောက်လာခဲ့တယ် ၊ မသန်းအေးရဲ့ဆရာ ရုပ်နဲ့တင်အတော်ကြောက်စရာကောင်းလှနေပြီ ညဘက်များမြင်လိုက်လို့ကတော့ လူလို့ကို ထင်ရက်စရာမရှိဘူး..။
အတော်လေး ဝေးဝေးတစ်နေရာကနေ ကြွလာတယ်လို့ပြောတဲ့ မသန်းအေးရဲ့ဆရာက “ ဟဲ့ သမီး.. အချိန်အခါလည်းသင့်ပြီ…ညနေစောင်းနေဝင်ရီတရောအချိန်ကွဲ့ သမီး ဝက်ကလေးကို အဆာကျွေးနေကျ အစာခွက်ကလေး အဘကိုပေးစမ်း ” ဆိုပြီး တောင်းလိုက်တော့ မသန်းအေး က ကမ်းပေးလိုက်တယ် ။
ဆက်ပြီးတော့ ဆရာက သူ့လက်ထဲက ဝက်အစာခွက်ကလေးကိုကိုင်ပြီး ဂါထာတွေကိုဆက်တိုက်ရွတ်နေရင်းလက်ထဲကနေ ခွက်ကို လွှတ်ချလိုက်တယ်.. ၊
ထူးခြားတာက ခွက်က လက်ထဲက လွှတ်ချလိုက်ပေမယ့် မြေကြီးပေါ်ပြုတ်ကျမသွားဘဲ လေပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့ ပျံတတ်သွားတယ်..
ဘယ်လောက်ဝေးဝေးသွားတယ်မသိဘူး.. တစ်ဖက်ရွာဖြစ်တဲ့ ကျွဲတွင်း ရွာ မှာရှိတဲ့ ဝက်သားစားမိတဲ့သူတွေရဲ့ အိမ်ရှေ့တွေမှာ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွနဲ့ တစ်အိမ်ပြီးတစ်အိမ် အဲ့ဒီ့ခွက်က အိမ်ရှေ့တည့်တည့်မှာ ကျလာပါလေရော..၊
ကျွဲတွင်းရွာသားတွေလည်းအကုန် အံ့သြနေမိကြတယ် ၊
မကြာပါဘူး…ခွက်ကလေး ကျကျသွားခဲ့တဲ့ အိမ်တွေထဲက အိမ်သားတွေထဲမှာမှ မသန်းအေးရဲ့ ဝက်ကလေးအသားကို သိသိမသိသိ စားခဲ့တဲ့သူတွေ အကုန် ချက်ချင်း ဝမ်းတွေပြိုင် လျောပြီး ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်းတို့အပါအဝင် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် နေ့မကူးခင်မှာပဲ သေကုန်ကြတယ်၊
အလောင်းတွေဆိုတာ ကျွဲတွင်းရွာမှာ တန်းစီနေတာပဲမြင်မကောင်းရှုမကောင်းအောင်ဖြစ်လို့ ၊ မြန်မာတွေအကျင့်ကလည်း ကိုယ်စားရရင် ကိုယ့်မိသားစိုကိုပါကျွေးချင်ကြတယ်လေ….
အခုတော့ အကျွေးကောင်းလို့ အလောင်းတွေ ပုံနေတဲ့အထိပါပဲ ၊ စားကောင်းမှန်းမသိ ၊ မစားကောင်းမှန်းမသိ ၊ အလကားရတာလေးမို့ စားမိတဲ့သူတွေလည်း ဘုမသိဘမသိနဲ့ ကိစ္စချောကုန်လိုက်တာ..
ကျွဲတွင်းတစ်ရွာလုံး တစ်ရက်တည်းနဲ့ လုံးပါးပါးကုန်တော့တာပဲ ။
ဝက်ကိုဦးဆောင်ပြီး သတ်ခဲ့ကြတဲ့ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မြင့်သိန်းတို့တွေလည်း မိသားစုလိုက် သေကုန်ကြတယ်
ထူးခြားတာက သူတို့ထဲက ညိုစိုးရဲ့ လူမမယ်အရွယ် လေးနှစ်သားကလေးလေး တစ်ယောက်ပဲ အသက်ရှင်တယ် ကလေးက ဝက်သားမစားလိုက်လို့ထင်ပါတယ် ၊
ကျွဲတွင်းရွာသူကြီးကတော့ ဝမ်းရောဂါဖြစ်တယ်ထင်ပြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ရွာပြောင်းပြေးဖို့စီစဉ်နေပြန်တယ် ၊
အဲ့ဒီ့အချိန်မှာပဲ ဝက်ပိုင်ရှင် မသန်းအေး ကျွဲတွင်းရွာသတင်းကိုကြားပြီးရောက်လာခဲ့တယ်.. မသန်းအေး ရွာကိုရောက်တော့ တစ်ရွာလုံးဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကြည့်ရင်း အားရပါးရရယ်မောလိုက်ရင်း.
“ဟား..ဟား.. ဟား.. မှတ်ထား အဲ့ဒါ ငါ့သမီးလေးကို ငါမသိတုန်းခိုးသွားပြီး သတ်စားလို့ မကျေနပ်လို့ လုပ်တာ ….
ငါလုပ်တာကို မကျေနပ်တဲ့ကောင်ရှိရင် ငါနဲ့အခုလာရှင်းလို့ရတယ် ဟား.. ” ဆိုပြီးပြောလာတယ်… ၊
မသန်းအေး စိန်ခေါ်သွားပေမယ့် ကျွဲတွင်းရွာကလူတွေကတော့ တစ်ယောက်မှ အသံမထွက်ရဲကြဘူး ၊ဖြစ်စဉ်အရဆို မသန်းအေးက မှန်နေတာကို…. ။
ရွာကတော့ နာရေးကိစ္စတွေနဲ့ တော်တော်လေး အလုပ်ရှုပ်သွားကြတယ်.. ၊ ရွာတစ်ဝက်နီးပါးလောက်လည်း လျော့သွားကြတယ် ။
နှစ်ပေါင်းတွေအလီလီကြာတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ပုံပြင်လိုလို ဇာတ်လမ်းလိုလိုနဲ့ ပြောစမှတ်တွင်ကျန်နေရစ်ခဲ့တယ်.. ၊
ကျွဲတွင်းရွာမှာလည်း ကလေးတိုင်းချစ်တဲ့ ပုံပြင်တွေ ပြောပြတတ်တဲ့ အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်
အဲ့ဒီအဘိုးကြီကလည်း ဒီပုံပြင်ဇာတ်လမ်းလေးကို ခဏခဏပြောပြောနေတတ်တယ် ၊
သူပြောတဲ့အကြိမ်ရေ ဘယ်လောက်များပါစေ ကလေးတွေကလည်း လမိုင်းရွာအကြောင်း ပညာသည်တွေရဲ့ ကလဲ့စားချေတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းဆိုရင် မျက်တောင်မခတ်တမ်းကို နားထောင်နေတတ်ကြတယ်လေ ၊
အဲ့ဒီအဘိုးကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တစ်ချိန်က အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူ ဦးညိုစိုး ရဲ့ လေးနှစ်သားအရွယ် ကလေးလေးဆိုတာကို ဒီဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးကို နားထောင်နေကြတဲ့သူတွေ သိပါရဲ့သလား..။
မွနျမာနိုငျငံထဲမှာရှိနတေဲ့ နယျမွို့လေးတှကေ ရှာငယျလေးတှတေိုငျးမှာ တဈရှာတဈပုဒျဆနျးဆိုတဲ့ ဇာတျလမျးလေးတှေ ၊ ပရလောကဖွဈရပျဆနျးလေးတှကေတော့ ရှိတတျကွပါတယျ ၊
အဲ့လိုမြိုးဆနျးကယျြတဲ့အဖွဈအပကျြ ၊ နှောငျးလူတှေ.. ကလေးငယျတှအေထိ လကျဆငျ့ကမျးပွီး အိပျယာဝငျပုံပွငျဆနျဆနျကြောရိုးယူပွီးပွောစမှတျတှငျလောကျတဲ့ ခြောကျခြောကျခြားခြား ဖွဈရပျမှနျ ဇာတျလမျးလေးတှဆေိုတာလညျး မနညျးမနောပါပဲ၊
ဒီလိုဇာတျလမျးလေးတှကေိုဖွဈခဲ့ ကွုံခဲ့ဖူးကွတဲ့ သူတှဆေိုတာလညျး တဈခြို့က ကှယျလှနျသှားကွသလို ၊ ဟိုးရှေးလူတှလေညျးဖွဈနိုငျပါတယျ ၊ တဈခြို့က အခုထိ သကျရှိထငျရှားရှိပွီး
လကျဆုပျလကျကိုငျသကျသနေဲ့တကှ တိတိကကြပြွောပွနိုငျတဲ့အထိ ရှိနဆေဲဖွဈတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ ၊ နရောတှလေညျး ရှိနတေုနျးပါပဲ ၊ အဲ့ဒီလို ပွောပွနိုငျဆဲဖွဈတဲ့ ရှာလေးတှထေဲမှာ ရှာလေးတဈရှာကလညျး အပါအဝငျပေါ့… ၊
ရှာကလေးရဲ့နာမညျကိုက ဆနျးနတော လမိုငျးရှာ တဲ့ ။
လမိုငျးဆိုတဲ့ ရှာကလေးက ဒသေအခွအေနအေရ တောဆနျပွီးတော့ လုံးဝနီးပါး မဖှံ့ဖွိုးသေးတဲ့ ရှာကလေးတဈရှာပါပဲ ၊
လမိုငျးရှာဆိုတာလညျး ကှငျးပွငျကယျြကွီးထဲမှာ တညျထားတဲ့ ရှာသေးသေးလေးတဈခုပေါ့ ၊
ရှာနာမညျကလညျး ရှာစတညျကတညျးကပေးထားတဲ့နာမညျလေးပါ ၊ ရှာကလေးရဲ့ထူးခွားခကျြတှထေဲက တဈခုက လမိုငျးရှာတဈရှာလုံးက လောငျးကစားကို ခုံမငျကွတာပါပဲ ၊
တဈရှာလုံးက လောငျးကစားနဲ့ပတျသတျရငျလူညီပွီးသား ၊ လောငျးကစားထဲမှာမှ ဖဲရိုကျတဲ့ဘကျမှာ ပိုအားသနျကွတဲ့သူတှေ ၊ အလှူမင်ျဂလာဆောငျ ၊ ဘုနျးကွီးဆှမျးကပျ ၊ ကုနျကုနျပွောရရငျ ကလေး ကငျပှနျးတပျပါ မကနျြ ဖဲဝိုငျးအမွဲရှိတယျ ၊
မိနျးမဝိုငျး ၊ ယောကျြားဝိုငျး ၊ ကလေးဝိုငျး ဝိုငျးကလညျး ဘာစုံသလညျးမမေးနဲ့ ၊ ဒီနဒေီ့အခြိနျအထိလညျး ဆော့နကွေတုနျးပဲ ၊
ဒါပမေယျ့ နယျမွေ ဖှံ့ဖွိုးလာလို့ထငျတယျ ဟိုးအရငျကလောကျတော့ မရဲကွတော့ဘူး ၊
သူတို့ရှာမှာ လူတဈယောကျ သပွေီဆို သိပျပြျောကွတာ ၊ ဘေးနားကရှာတှကေဆိုရငျ တဈခုခုအခငျြးခငျြး စနောကျကွတဲ့အခါ တှငျတှငျပွောလရှေိ့တာတဈခုရှိသေးတယျ
ဘာတဲ့ “မငျးသရေငျ လမိုငျးသှားပို့မယျ အနညျးဆုံးတော့ ဆိုငျကယျတဈစီးလောကျတော့ စီးလို့ရမှာသခြောတယျ ” လို့ ပွောလရှေိ့ကွတယျ ၊
ဆိုလိုတာက ဒီမသာ (အသုဘ)ကို အမှီပွုပွီး ဖဲရိုကျရငျးက ငှတှေနေိုငျပွီး ဆိုငျကယျတောငျစီးနိုငျတဲ့အထိလို့ပွောခငျြတာ ၊
ဟုတျလညျးဟုတျတာပဲလေ လမိုငျးရှာက ရှာသာငယျတာ သူတို့ရှာမှာ ဖဲဝိုငျးဆိုတာ ပွတျတယျလို့ကိုမရှိတော့ အနီးအနားပတျပတျလညျမှာရှိတဲ့ ရှာတှဆေီက ဖဲ ၊လောငျးကစား ဝါးသနာအိုးတှနေဲ့ လမိုငျးရှာက စညျကားနဆေဲပဲ ၊
အသုဘဆိုရငျ အလောငျးကို အရိုးကတြဲ့အထိထားပွီး ဖဲရိုကျကွတဲ့ရှာ အဲ့လောကျအထိခုံမငျကွတာ ၊ နောကျပွီးအဲ့ဒီရှာက ရှာခံတှကေ စရိုကျနညျးနညျးကွမျးကွသေးတယျ ၊ ရှာမှာ ပညာသညျတှလေညျး အရမျးပေါမြားကွတယျ ၊
လမိုငျးရှာသူလေးတှဆေိုတာလညျး မွို့ကမငျးသမီးရှုံ့လောကျတဲ့အထိ ခြောလှကွတဲ့သူတှေ ၊ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ့ ရှာသူလေးတှကေို တဈခွားရှာက ကာလသားတှေ ပိုးပနျးဖို့ နနေသောသာ မကျြလုံးနဲ့တောငျ စိုကျမကွညျ့ရဲ့ကွဘူး ၊
ပညာသညျပေါမြားတဲ့ရှာမို့လို့ ကွောကျကွတယျ ၊
တဈရှာနဲ့တဈရှာအသှားအလာလုပျရငျလညျး အခုခတျေဆို ဆိုငျကယျတှကေို တှငျတှငျကယျြကယျြ သုံးလာပွီဆိုပမေယျ့ အရငျဆို ထုံးစံအတိုငျး လှညျးကိုပဲ အဓိကထား သုံးကွရတာလေ ။
တဈနေ့ လမိုငျးရှာမှာ အသုဘ ရှိတယျဆိုတဲ့အသံကိုကွားလို့ လမိုငျးရှာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ ကြှဲတှငျး ရှာက ဖဲဝါသနာအိုး သုံးယောကျဖွဈတဲ့ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျး တို့တှကေ လမိုငျးရှာကို ခြီတတျလာဖို့ ပွငျနကွေပွီ ၊
ကြှဲတှငျးရှာဆိုတာ လမိုငျးရှာနဲ့ ကပျလကျြဆိုပမေယျ့ တဈရှာနဲ့တဈရှာကွားမှာ မကျြစိတဈဆုံး ကွညျ့မကုနျနိုငျတဲ့ လယျကှငျးကယျြကွီးတှကေ ခွားထားသေးတယျ ၊
အနညျးဆုံး တဈရှာနဲ့တဈရှာအကှာအဝေး နှဈမိုငျကြျောကြျောလောကျတော့ ရှိလိမျ့မယျ ၊ ဒီလိုနဲ့ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျး တို့ သုံးယောကျသား နှားလှညျးလေးနဲ့ လမိုငျးရှာဆီကို လှမျးလာခဲ့ကွတယျ ၊
ဖဲကစားခငျြဇောနဲ့မို့ စိတျတှလေညျးလောနကွေတယျ ၊ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျလညျး ဘယျလိုကစားမယျဆိုတဲ့အကွောငျးတှေ ၊ အရငျတုနျးက ဘယျလောကျထိနိုငျခဲ့ဖူးတယျ ၊
ဘယျလိုမြိုးပှဲတှမှော ဆနျးဆနျးပွားပွားဖွဈတာကွုံဖူးတယျဆိုတာတှကေို အခငျြးခငျြး ရပေတျမလညျအောငျ လမျးတဈလြှောကျမှာပွောလာရငျးကနေ လမိုငျးရှာကို ရောကျလာခဲ့ကွတယျ ၊
ရှာအဝငျမှာသူတို့ကို ကွိုဆိုနတေဲ့ ရှာအဝငျလမျးဘေးနားက ထနျးပငျရှညျကွီးတှနေဲ့ တဲအိမျပုပုလေးတှကေို ရငျခုနျစှာနဲ့ကွညျ့လိုကျရငျး ညိုစိုး က “ ဟယေ့ောငျတှေ မငျးတို့အသိဆိုတဲ့အိမျက ရှာဘယျနရောနားလောကျမှာလဲ ” လို့ မေးလိုကျတယျ ၊
ညိုစိုးအမေးကို ခကျြခငျြးဆိုသလို မွငျ့သိနျး က ထဖွလေိုကျတယျ “ဒီလမျးအတိုငျးရှနေ့ညျးနညျးဆကျသှား ဟေ့ာဟိုမှာတှလေား အေး.. အဲ့ဒီအိမျဘေးနားက လမျးအတိုငျးဆကျဝငျလိုကျ တဈအိမျ ၊ နှဈအိမျ ၊ သုံးအိမျမွောကျ အိမျရှမှေ့ာ ဒနျးပငျလေးစိုကျထားတဲ့အိမျပဲကှ
အေး.. အဲ့ဒီအိမျရှမှေ့ာရပျလိုကျတော့ ” မွငျ့သနျးက ညိုစိုးအမေးကိုဖွလေိုကျရငျး နှားလှညျးမောငျးနတေဲ့ ဖိုးတေ ကိုလညျး လမျးသခြောညှနျပွလိုကျသေးတယျ။
မွငျ့သနျးပွောတဲ့အိမျရောကျတော့ သူတို့တှေ လှဲပျေါကဆငျးလိုကျကွပွီးအိမျထဲကို ဝငျသှားလိုကျကွတယျ ၊
အိမျရှငျတှကေ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျး တို့ကို မွငျတော့ အားရဝမျးသာကွိုဆို နှုတျခှနျးဆကျသသေးတယျ ၊ အဲ့ဒီ့အခါမှ မွငျ့သနျးက အိမျရှငျတှထေဲက သူ့အသိဆိုတဲ့ အရီးလေးတဈယောကျကိုစကားလှမျးပွောလိုကျတယျ
“အရီးလေးကွိုငျ ကြုပျတို့ ဒီရှာမှာ နာရေးတဈခုရှိတယျကွားထားလို့ အပငျြးပွေ ဖဲလာကစားတာပါ အရီးလေး ” အဲ့လိုလညျးပွောလိုကျရော တဈဖကျက အရီးလေးက
“ အေးကှယျ ရှာအနောကျဘကျနားကအိမျမှာရှိတာလေ၊ စညျတာမှပွောမနနေဲ့ ငါတို့ရှာအကွောငျးလညျးနငျသိသားပဲ ကဲကိုယျတျောတှေ သှားမယျဆိုလညျး မွနျမွနျသှားပွီးမွနျမွနျပွနျလာကွ ၊
ငါ့တူတှေ နောကျကနြရေငျ မှောငျပွီးတော့ ရှာအပွနျခတျနမေယျကှယျ”
အရီးလေးကွိုငျ စကားကွောငျ့ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျး တို့သုံးယောကျသား ငှစေက်ကူအပွညျ့ ထညျ့လာတဲ့ ဘေးသိုငျးလှယျအိတျတှကေို သိုငျးလှယျလိုကျရငျး သူတို့စီးလာတဲ့နှားတှကေို ကွိုးဖွညျပေး ၊ ရတေိုကျ ၊ အစာကြှေးလုပျရငျး အရီးလေးအိမျမှာ ဒေါကျထောကျထားတဲ့ လှညျးကလေးကိုပါ ထားခဲ့လိုကျပွီး ဖဲဝိုငျးဆီကို အရမျး တကျကွှနတေဲ့ ခွလှေမျးတှနေဲ့ အတူတူသှားဖို့ ပွငျနကွေတုနျး ၊ အိမျဝိုငျးထဲကို ဝငျလာတဲ့ လူတဈယောကျနဲ့ ဆုံပါလရေော..
အဲ့ဒီ့လူကလညျး မွငျ့သိနျးကိုမွငျတာနဲ့ ရငျးရငျးနီးနီးပုခုံးကိုဖကျထားပွီး စကားတှပွေောရငျး ရှာထဲက တဈနရောဆီကို ဦးတညျပွီးချေါသှားပါလရေော ၊ ဟိုနရောရောကျတော့မှ ရှာထဲက အရကျပုနျးဆိုငျဖွဈနတောကိုသိလိုကျရတယျ..
ချေါလာတဲ့သူကလညျး မွငျ့သိနျးနဲကရငျးနီးတဲ့ မိတျဆှတေဈယောကျဖွဈနပွေနျတော့ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျး တို့တှလေညျး အားနာပါးနာနဲ့ လိုကျပွီးအရကျသောကျဖွဈခဲ့ကွသေးတယျ ၊
အရကျသောကျပွီးတော့မှ ရှာထဲက အသုဘအိမျ ဖဲဝိုငျးဆီကို ဦးတညျပွီးထှကျသှားဖွဈကွတယျ ။
နာရေးအိမျ ရောကျတော့ အိမျတှငျးအိမျပွငျမှ လူတှေ ပွညျ့လြှံနတောကိုမွငျလိုကျရတယျ ၊ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျး တို့တှလေညျး ဖဲဝိုငျးတှကေိုလိုကျကွညျ့ပွီး
ဝိုငျးခြောငျတဲ့ ဖဲဝိုငျးထဲမှာ ဝငျထိုငျလိုကျကွရငျး အိမျကနေ မရှိရှိ ရှိတာလေးတှအေကုနျသယျလာတာလေးနဲ့ ဝငျကစားဖွဈကွတယျ ၊
ကံကပဲဆိုးနတောလားတော့မသိဘူး တဈကွိမျပွီးတဈကွိမျ ဆကျတိုကျကို သုံးယောကျလုံး ရှုံးနကွေရော ၊ အရကျကလေးကလညျးအရှိနျတကျလာတော့ ရှုံးလေ ပိုပွီး ငှထေိုးလနေဲ့ သိပျမကွာလိုကျပါဘူး
သုံးယောကျသား ပါသမြှအကုနျကုနျသှားပါလရေော..၊ အလာတုနျးက လှယျလာတဲ့ လှယျအိတျ ဖောငျးဖောငျးလေးတှကေလညျး ပွားကပျလို့ ၊ ထပျဆော့ခငျြသေးပမေယျ့ လောငျးစရာငှကွေေးတဈပွားတောငျ မရှိတော့တာမို့ သုံးယောကျလုံးလကျလြော့ပွီး ထပွနျလာလိုကျကွတယျ ။
ဒီ လမိုငျးရှာမှာက ဖဲဝိုငျးတှေ ၊လောငျးကစာဝိုငျးတှေ ဘယျလောကျမြားမြား ၊ ရနျဖွဈတာ ၊ ခိုးတာ ၊ ဝှကျတာ ၊ ကလိနျကကဈြကတြာတှေ မရှိကွဘူး ၊
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရှာစညျးကမျးကိုက လမိုငျးရှာမှာ ဘယျသူမှ မခိုးရဘူး ၊ ကလိနျကကဈြမကရြဘူး ၊ တကယျလို့လုပျခငျြလညျးလုပျခှငျ့ပေးထားတယျ သူတို့မသိအောငျလုပျပေါ့လေ… ၊
သိသှားရငျတော့ လုပျတဲ့သူအတှကျ မတှေးဝံ့စရာဘဲ ၊ အိမျကိုအသကျပွနျပါသှားမယျမထငျလနေဲ့ ၊ တဈရှာလုံးနီးပါးက (စုနျး၊အောကျလမျး)ပညာသညျတှလေေ ။
ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျး တို့သုံးယောကျသား လမိုငျးရှာကနေ ဖဲရှုံးပွီး စိတျပကျြလကျပကျြနဲ့ နှားလှညျးထားထားတဲ့အိမျကိုသှား နှားလှညျးလေးယူ ၊ အိမျရှငျတှကေိုနှုတျဆကျပွီး ကိုယျ့ရှာကိုယျပွနျဖို့ပွငျလိုကျကွတယျ ၊
အခြိနျက ညတောငျရောကျနပွေီ ၊ ဒီနညေ့မြားဖဲနိုငျလိုကျရငျ ဒီရှာမှာပဲ တဈညလုံးမူးအောငျသောကျပွီး မနကျမှ ပွနျမယျစိတျကူးထားတာ အခုတော့ အရှုံးသမားတှရေဲ့ အိမျအပွနျလမျးက တိတျဆိတျလို့ ။
လရောငျက ညအမှောငျကို တိုးမပေါကျသလို ဝါးတားတားလေးနဲ့..
လှညျးမောငျးသူကအလာတုနျးကလိုပဲ ဖိုးတေ ၊ ကနျြတဲ့နှဈယောကျ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျး တို့က လှညျးအနောကျမှာ ပတျလကျကလေး မိုးကောငျးကငျမဲမဲကွီးကိုကွညျ့ရငျး လိုကျပါလာကွတယျ ၊
သူတို့သုံးယောကျသားလှညျးကလေး တအိအိနဲ့မောငျးလာလိုကျတာ လမိုငျးရှာထဲကတောငျ ထှကျစပွုနပွေီ ၊
ရှာအထှကျ လယျကှငျးအစပျလေးအနားရောကျတော့ သူတို့လှညျးအနောကျက ထူးဆနျးတဲ့ အသံတဈသံကို ကွားလိုကျရတယျ ။
လူတှကေ ညဈနကွေတဲ့အထဲ လမိုငျးရှာက သူငယျခငျြးထညျ့ပေးလိုကျတဲ့ မီးတောကျအရကျပုလငျးနှလုံးကအစဈပါလာသေးတယျလေ ၊
ရုတျတရကျ လှညျးအနောကျက အသံကွားရတော့ အံ့သွသှားပွီး သုံးယောကျသား လှညျးကိုခဏရပျလိုကျရငျး အသံကွားတဲ့နရောကို လိုကျရှာကွညျ့နမေိတယျ ၊
အသံက သူတို့အနောကျဘကျမှာကနျြခဲ့တဲ့ လမိုငျးရှာအထှကျနားလေးမှာရှိတဲ့ ခွုံထဲကနေ ကွားနရေတဲ့အသံ ၊
ခွုံကလေးကလညျးလှုပျလှုပျ လှုပျလှုပျနဲ့ အားလုံး ခွုံနရောကို သခြော စိုကျကွညျ့နမေိတုနျး ခွုံထဲကနေ ဝုနျးဆို ဝကျကလေးသေးသေးလေးတဈကောကျ ခုနျထှကျလာတာကို တှလေို့ကျရတယျ ၊
လရောငျမှိနျပွပွဆိုပမေယျ့ ဝကျကလေးကိုတော့ သဲသဲကှဲကှဲမွငျနိုငျသေးတယျလေ ။
ဝကျကလေးမို့ သူတို့အာရုံတှကေို ပွနျလှဲလိုကျရငျး ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျးတို့လညျး လှညျးကိုဆကျမောငျးလိုကျကွတော့ ဝကျကလေးကတော့ အန်တရယျကိုမွငျပုံမရဘူး.. တအိအိသှားနတေဲ့ သူတို့လှညျးလေးနောကျကို ပွေးလိုကျလာပါလရေော ၊
ဝကျကလေးဆိုပမေယျ့ ဝကျပေါကျတဈကောငျပါ ၊ လူအရမျးယှဉျနတေယျ ၊ ဝကျပေါကျလေးက အခြိနျနှဈဆယျလောကျတော့ထှကျမယျ့ပုံရှိတယျ ၊
ဘယျသူဘယျဝါပိုငျတဲ့ ဝကျမှနျးလညျးသူတို့မသိဘူး ၊ လူအရမျးယဉျနတောနဲ့ သူတို့တှေ ခြော့ချေါသှားကွဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျကွတယျ ။
“ ဟယေ့ောငျတှေ ငါတို့ ဖဲလညျးရှုံးလာတဲ့အတူတူ ဒီရှာက ငါတို့နဲ့ထိုကျတနျတာ တဈခုခုတော့ ယူသှားသငျ့တယျလို့ ငါထငျတယျ ”
ညိုစိုးစကားထဲမှာ အဓိပ်ပာယျတှပေါနမှေနျးသိလိုကျကွတာမို့ ဖိုးတေ က ဝငျထောကျလိုကျတယျ
“လူရိပျလူကဲလညျးကွညျ့ဦး ဒီရှာအကွောငျးမငျးပိုသိပါတယျ မွငျ့သိနျး”
မွငျ့သိနျးလညျး ပတျဝနျးကငျြကိုတဈခကျြကွညျ့လိုကျတော့ လူရှငျးနတောနဲ့ လူယဉျနတေဲ့ ဝကျပေါကျလေးကို ခြော့မော့ပွီး လှညျးနောကျက ချေါလာခဲ့လိုကျတယျ ၊
ဝကျကလေးကို ပှခြေီ့ပွီး လှညျးပျေါတငျသယျလာလိုကျတာ ဝကျကလေးကလညျး ငွိမျနတောပဲ ။
ဒီဝကျကလေးက အရငျကလညျး လှညျးတှဘောတှလေိုကျစီးဖူးတဲ့ပုံမြိုးပဲ ၊ သခငျနဲ့လညျးရငျးရငျးနီးနီးနတေဲ့ပုံပျေါတယျ ၊ တှတေဲ့လူနောကျကို လိုကျရဲတယျဆိုတော့ လူမှေးထားတာတော့ သခြောနပွေီ ၊
ဒါပမေယျ့ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျး တို့သုံးယောကျလညျး ထှထှေထေူးထူးစဉျးစားမိမနတေော့ဘူး.. သူတို့ရှာအရောကျ လှညျးကိုမောငျးလာခဲ့လိုကျကွတယျ ၊
ရှာအနားကိုပွနျရောကျတော့ သုံးယောကျသား ညတှငျးခငျြးပဲ ရှာအစပျနားက အိမျမှာ ကိုငျစရာတှတေောငျးပွီး ဝကျကလေးကို (ဖျော ၊ သတျ) ကိုငျကွတော့တာပဲ ၊ ကိုငျလို့လဲပွီးရော အသားတှကေို သူတို့စီးလာတဲ့ လှညျးပျေါမှာ ဖကျခငျးတငျပွီး ရှာထဲကိုဝငျလာခဲ့ကွတယျ ၊
သူတို့ ဝကျကိုငျထားတဲ့ ဓါးတှေ ၊ ရနှေေးတညျဖို့ ဒယျတှေ ၊ ပုဆိနျတှကေို ငှားပေးတဲ့ ရှာအစပျနားက အိမျအတှကျလညျး ဟငျးစားပေးခဲ့ကွသေးတယျ ၊
ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ့အိမျက တဈအိမျလုံး ဝကျသားရှောငျထားတဲ့ကရငျစပျတဲ့အိမျမို့ မယူကွဘူး သူတို့ပစ်စညျးတှကေိုပဲ သခြော ပွောငျအောငျ ပွနျဆေးပေးခဲ့ပါလို့ပွောခဲ့တယျ ။
ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျး တို့တှလေညျး သူတို့ ဝကျကိုငျခဲ့တဲ့ ပစ်စညျးတှကေို သခြော ပွနျဆေးကွောပွီးပေးခဲ့လိုကျကွတယျ ။
ညက ၂ခကျြတီးလောကျပဲရှိသေးတယျ.. ဝကျကလညျး အခြိနျနှဈဆယျလောကျထှကျတဲ့ဝကျဆိုတော့ မကုနျတာနဲ့ မိသားစု ဆှမြေိုးနီးစပျအိမျတှကေို လိုကျဝပေေးလိုကျကွတယျ.. ၊
ဒီလိုနဲ့ ညတဈညက ကုနျဆုံးသှားခဲ့ပွီ.. ။
နံနငျခငျးတဈခုကို မသာယာစအေောငျပွုလိုကျသူက လမိုငျးရှာက ရှာသူ မသနျးအေး ၊ အသကျငါးဆယျဝနျးကငျြရှိတဲ့ မသနျးအေးတဈယောကျ သူမှေးထားတဲ့ ဝကျကလေးပြောကျလို့ တဈရှာလုံးကို ပတျသောငျးကနျြးပွီး လိုကျရှာနလေိုကျတာ ဒေါငျးတောကျနတောပဲ ။
“ အမလေး.. ကြုပျသမီးလေး ကိုယျကြိုးနညျးပွီထငျပါရဲ့ ၊ ဝကျကလေးတှပေေါကျလာကတညျးက သူတဈကောငျပဲအသကျရှငျတာနဲ့ သားသမီးမရှိတဲ့ကြုပျမှာလေ.. ဒီဝကျကလေးကို ကလေးတဈယောကျလို ကြုပျနို့တိုကျပွီး မှေးလာတာပါတျော ၊
ခါတိုငျးဆို သမီးလေး အခြိနျတနျရငျ အိမျပွနျလာနကေပြါ မနကေ့ တဈနကေုနျပြောကျနတော ဒီမနကျအထိပွနျမလာဘူး.. သခြောနပေါပွီ ကြုပျသမီးလေးတဈခုခုဖွဈပွီထငျတယျ အဟီး.. ”
တဖွညျးဖွညျး တဈရှာလုံးလညျးအနှံ့မေးပွီးရော.. သူ့ဝကျကလေးရှာထဲမှာ မရှိတော့တာသခြောပွီဆိုတာသိလိုကျတဲ့အတှကျ မသနျးအေး ဒေါသပိုထှကျသှားမိတယျ ။
မသနျးအေး ဆိုတာ ရှာထဲမှာ ဆယျနှဈကွိုးလို့တောငျ အမြားက သတျမှတျထားကွတဲ့သူတဈယောကျ မသနျးအေး နဲ့ ပတျသတျတဲ့အရာမှနျသမြှ တဈရှာလုံးကရှောငျကွတယျ ၊ ကွောကျကွတယျ ၊
အခု တဈရှာသားတှကေ မသနျးအေးရဲ့ ဝကျကလေးကို ခိုးသှားတဲ့ကိစ်စဖွဈခဲ့ပွီ ၊ လမိုငျးရှာတဈရှာလုံးကလညျး ဒီတဈခါ ပှဲကွီးပှဲကောငျးပဲဆိုပွီး မသနျးအေး ဘယျလိုတုနျ့ပွနျမယျဆိုတာကို စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့နမေိကွတယျ ။
ရကျပိုငျးလောကျတော့ မသနျးအေး ဘာမှလှုပျရှားတာမတှကေရဘူး..ပတျဝနျးကငျြကပွနျသိထားကွတာတော့ မသနျးအေး က စိတျနာဒေါသကွီးလှနျးလို့ ကိုယျတိုငျလုပျရငျ ခံရတဲ့သူ သိပျမခံရမှာစိုးလို့ဆိုပွီး သူကဆရာကိုပငျ့ထားတယျလို့ပွောကွတယျ ။
ဒီသတငျးတှကေလညျး အမှနျပါပဲ ရကျပိုငျးလောကျအကွာမှာ မသနျးအေးရဲ့ ဆရာဆိုတဲ့သူ မသနျးအေးဆီကို ရောကျလာခဲ့တယျ ၊ မသနျးအေးရဲ့ဆရာ ရုပျနဲ့တငျအတျောကွောကျစရာကောငျးလှနပွေီ ညဘကျမြားမွငျလိုကျလို့ကတော့ လူလို့ကို ထငျရကျစရာမရှိဘူး..။
အတျောလေး ဝေးဝေးတဈနရောကနေ ကွှလာတယျလို့ပွောတဲ့ မသနျးအေးရဲ့ဆရာက “ ဟဲ့ သမီး.. အခြိနျအခါလညျးသငျ့ပွီ…ညနစေောငျးနဝေငျရီတရောအခြိနျကှဲ့ သမီး ဝကျကလေးကို အဆာကြှေးနကြေ အစာခှကျကလေး အဘကိုပေးစမျး ” ဆိုပွီး တောငျးလိုကျတော့ မသနျးအေး က ကမျးပေးလိုကျတယျ ။
ဆကျပွီးတော့ ဆရာက သူ့လကျထဲက ဝကျအစာခှကျကလေးကိုကိုငျပွီး ဂါထာတှကေိုဆကျတိုကျရှတျနရေငျးလကျထဲကနေ ခှကျကို လှတျခလြိုကျတယျ.. ၊
ထူးခွားတာက ခှကျက လကျထဲက လှတျခလြိုကျပမေယျ့ မွကွေီးပျေါပွုတျကမြသှားဘဲ လပေျေါကိုတကျသှားပွီးတော့ ပြံတတျသှားတယျ..
ဘယျလောကျဝေးဝေးသှားတယျမသိဘူး.. တဈဖကျရှာဖွဈတဲ့ ကြှဲတှငျး ရှာ မှာရှိတဲ့ ဝကျသားစားမိတဲ့သူတှရေဲ့ အိမျရှတှေ့မှော ခုနျဆှ ခုနျဆှနဲ့ တဈအိမျပွီးတဈအိမျ အဲ့ဒီ့ခှကျက အိမျရှတေ့ညျ့တညျ့မှာ ကလြာပါလရေော..၊
ကြှဲတှငျးရှာသားတှလေညျးအကုနျ အံ့သွနမေိကွတယျ ၊
မကွာပါဘူး…ခှကျကလေး ကကြသြှားခဲ့တဲ့ အိမျတှထေဲက အိမျသားတှထေဲမှာမှ မသနျးအေးရဲ့ ဝကျကလေးအသားကို သိသိမသိသိ စားခဲ့တဲ့သူတှေ အကုနျ ခကျြခငျြး ဝမျးတှပွေိုငျ လြောပွီး ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျးတို့အပါအဝငျ တဈယောကျပွီးတဈယောကျ နမေ့ကူးခငျမှာပဲ သကေုနျကွတယျ၊
အလောငျးတှဆေိုတာ ကြှဲတှငျးရှာမှာ တနျးစီနတောပဲမွငျမကောငျးရှုမကောငျးအောငျဖွဈလို့ ၊ မွနျမာတှအေကငျြ့ကလညျး ကိုယျစားရရငျ ကိုယျ့မိသားစိုကိုပါကြှေးခငျြကွတယျလေ….
အခုတော့ အကြှေးကောငျးလို့ အလောငျးတှေ ပုံနတေဲ့အထိပါပဲ ၊ စားကောငျးမှနျးမသိ ၊ မစားကောငျးမှနျးမသိ ၊ အလကားရတာလေးမို့ စားမိတဲ့သူတှလေညျး ဘုမသိဘမသိနဲ့ ကိစ်စခြောကုနျလိုကျတာ..
ကြှဲတှငျးတဈရှာလုံး တဈရကျတညျးနဲ့ လုံးပါးပါးကုနျတော့တာပဲ ။
ဝကျကိုဦးဆောငျပွီး သတျခဲ့ကွတဲ့ ဖိုးတေ ၊ ညိုစိုး ၊ မွငျ့သိနျးတို့တှလေညျး မိသားစုလိုကျ သကေုနျကွတယျ
ထူးခွားတာက သူတို့ထဲက ညိုစိုးရဲ့ လူမမယျအရှယျ လေးနှဈသားကလေးလေး တဈယောကျပဲ အသကျရှငျတယျ ကလေးက ဝကျသားမစားလိုကျလို့ထငျပါတယျ ၊
ကြှဲတှငျးရှာသူကွီးကတော့ ဝမျးရောဂါဖွဈတယျထငျပွီးကွောကျကွောကျလနျ့လနျ့နဲ့ ရှာပွောငျးပွေးဖို့စီစဉျနပွေနျတယျ ၊
အဲ့ဒီ့အခြိနျမှာပဲ ဝကျပိုငျရှငျ မသနျးအေး ကြှဲတှငျးရှာသတငျးကိုကွားပွီးရောကျလာခဲ့တယျ.. မသနျးအေး ရှာကိုရောကျတော့ တဈရှာလုံးဖွဈပကျြနတောတှကေိုကွညျ့ရငျး အားရပါးရရယျမောလိုကျရငျး.
“ဟား..ဟား.. ဟား.. မှတျထား အဲ့ဒါ ငါ့သမီးလေးကို ငါမသိတုနျးခိုးသှားပွီး သတျစားလို့ မကနြေပျလို့ လုပျတာ ….
ငါလုပျတာကို မကနြေပျတဲ့ကောငျရှိရငျ ငါနဲ့အခုလာရှငျးလို့ရတယျ ဟား.. ” ဆိုပွီးပွောလာတယျ… ၊
မသနျးအေး စိနျချေါသှားပမေယျ့ ကြှဲတှငျးရှာကလူတှကေတော့ တဈယောကျမှ အသံမထှကျရဲကွဘူး ၊ဖွဈစဉျအရဆို မသနျးအေးက မှနျနတောကို…. ။
ရှာကတော့ နာရေးကိစ်စတှနေဲ့ တျောတျောလေး အလုပျရှုပျသှားကွတယျ.. ၊ ရှာတဈဝကျနီးပါးလောကျလညျး လြော့သှားကွတယျ ။
နှဈပေါငျးတှအေလီလီကွာတော့ ဒီဇာတျလမျးလေးက ပုံပွငျလိုလို ဇာတျလမျးလိုလိုနဲ့ ပွောစမှတျတှငျကနျြနရေဈခဲ့တယျ.. ၊
ကြှဲတှငျးရှာမှာလညျး ကလေးတိုငျးခဈြတဲ့ ပုံပွငျတှေ ပွောပွတတျတဲ့ အဘိုးကွီးတဈယောကျရှိသေးတယျ
အဲ့ဒီအဘိုးကွီကလညျး ဒီပုံပွငျဇာတျလမျးလေးကို ခဏခဏပွောပွောနတေတျတယျ ၊
သူပွောတဲ့အကွိမျရေ ဘယျလောကျမြားပါစေ ကလေးတှကေလညျး လမိုငျးရှာအကွောငျး ပညာသညျတှရေဲ့ ကလဲ့စားခတြေဲ့ ဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးဆိုရငျ မကျြတောငျမခတျတမျးကို နားထောငျနတေတျကွတယျလေ ၊
အဲ့ဒီအဘိုးကွီးကိုယျတိုငျကလညျး ဒီဇာတျလမျးထဲမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ တဈခြိနျက အသကျရှငျကနျြခဲ့သူ ဦးညိုစိုး ရဲ့ လေးနှဈသားအရှယျ ကလေးလေးဆိုတာကို ဒီဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးလေးကို နားထောငျနကွေတဲ့သူတှေ သိပါရဲ့သလား..။